नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने स्थितिमा छैनौं - Karobar National Economic Daily
नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने स्थितिमा छैनौं
query_builderJuly 16, 2017 10:00 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility2931
प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल डिन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)
२०४६ सालदेखि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा सहायक प्राध्यापक भएर प्रवेश गरेका प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि क्रियाशील रहँदै आएका छन् ।
२०५९ सालमा प्राध्यापक भएका प्रा. डा. अग्रवाल क्रमशः इन्टरनल मेडिसिन विभागका विभागीय प्रमुख, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा शास्त्र अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुँदै विगत सात महिनाअघि आईओएमको डिनमा नियुक्त भएर आईओएम सम्हालिरहेका छन् ।
लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा सुधारमा क्रियाशील अग्रवाल गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका बारेमा स्प्रष्ट वक्ताका रूपमा वकालत गर्ने तथा नीति निर्माण गर्ने प्राध्यापकका रूपमा परिचित छन् ।
यिनै डिन प्रा. डा. अग्रवालसँग चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित काम, कर्तव्य र अधिकार, आईओएमको सुधार, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी जुनु भट्टराईले गरेको कुराकानी :
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि आईओएमले अहिले के गर्दै छ ?
चिकित्सा क्षेत्र र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सबैतिर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । गुणस्तरको कुरा गर्दा यसअघिको शिक्षा गुणस्तरीय थिएन भन्ने प्रश्न आउला तर त्यस्तो होइन, समयसँगसँगै शिक्षा पनि परिमार्जित हुँदै जान्छ ।
गुणस्तरीय सेवा दिन गुणस्तरीय शिक्षा हुनु आवश्यक छ । अर्को कुरा, देशमा फिजियोथेरापीजस्ता केही विधाको पढाइ कहीं सुरु भएको छैन, त्यस्ता केही विषयमा कोर्स सुरु गर्ने कि भन्ने योजनामा छौं । त्यसैगरी यसै वर्षदेखि बीडीएसको कोर्स सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । देशभरमा भएका नर्सिङ क्याम्पसको स्तर बढाउन आईओएम लागीपरेको छ ।
यसलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले बुटवल र बर्दिवासमा दुईवटा मेडिकल कलेज खोल्ने कि भनेर योजना अगाडि सारेको छ । यसलाई आईओएमअन्तर्गत नै राख्ने भन्ने कुरा रहेकाले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
शिक्षामा मात्र होइन, सेवामा पनि हामी सुधारतर्फ उन्मुख भइरहेका छौं । शिक्षण अस्पतालमा पहिलेको तुलनामा सुपर स्पेसियालिटी सेवा सुरु गरेका छौं । नेपाल सरकारको सहयोग रहेका कारण हामी शिक्षा मात्र नभई सेवा पनि गुणस्तरीय बनाउन सफल हुँदै छौं ।
शिक्षा र सेवामा गुणस्तरीयताको कुरा गर्नुभयो, यसमा खास कस्तो के कुरा आउँछ ?
गुणस्तर भन्नेबित्तिकै मुख्य दुईवटा विषय आउँछन् । पहिलो कुरा, गुणस्तरीय विद्यार्थी जुन हामीमा त्यस्तो समस्या छैन । किनभने हामी योग्यता सूची (मेरिट) बेसमा विद्यार्थी भर्ना लिन सुरु गरिसकेका छौं । दोस्रो विषय भनेको विद्यार्थीले पाउनुपर्ने सीप र क्षमता पायो कि पाएन भन्ने हो । यसको जाँच गर्ने प्रक्रियामा पनि केही सुधार गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरामा कलेज आईओएम किन सधैं किचलोमा पर्छ ?
प्रस्ट कुरा के छ भने सबैभन्दा पहिलो त यसमा राष्ट्रिय नीति नै बन्नुपर्छ । नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनेको ख्यालठट्टाको विषय हँुदै होइन । सम्बन्धन दिनु भनेको त्यो कलेजको प्राज्ञिक गुणस्तर मेन्टेन गर्ने अभिभारासमेत त्यो कलेजलाई दिनु हो, त्यसलाई हामी कतिसम्म पूरा गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि हुन्छ ।
सम्बन्धन दिनु भनेको केवल सिट तोकिदिने र निरीक्षण गरिदिने काम होइन; उसको शैक्षिक र प्राज्ञिक गुणस्तरको निरीक्षण, अनुगमन, परीक्षा सञ्चालनलगायतका सबै पक्ष हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । कलेजको परीक्षालगायतका कामले गर्दा अस्पतालको सेवामा पनि केही हदसम्म असर परेको देखिन्छ ।
हामीले अहिले जति कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छौं, ती सबै कलेजको क्वालिटी मेन्टेन गर्नसमेत धौधौ परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले यो बेला नयाँ सम्बन्धन दिने स्थितिमा छैनौं । त्यसैले पनि यो विषयलाई लिएर किचलो हुने गरेको हो ।
आईओएमले आफ्नो कलेज र आफूले सबन्धन दिएका कलेजलाई फरक व्यवहार गर्छ भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?
यो बिलकुल गलत हो । हाम्रो नीतिमा आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त कलेज बराबर हुन् । दुवै आईओएमका सन्तानसरह हुन् । कोही अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई विभेद गर्न सक्छ र ? तर, हामीले दुवैलाई भन्ने एउटै साझा कुरा भनेको गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो । यही विषयलाई लिएर आईओएमले गरेको कडा निगरानीलाई फरक व्यवहारको बुझाइ भएको हुन सक्छ ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन भन्नुहुन्छ, त्यति हुँदाहँुदै आईओएमले आफ्नै क्याम्पसमा चाहिँ किन सिट नबढाएको ?
हो, हामीकहाँ बेड, बिरामी, दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि अरूले सयभन्दा बढी सिट पढाउँदा आईओएमले किन ७५ सिट मात्रै भन्ने प्रश्न स्वाभाविक पनि हो । तर, यतिले मात्र सिट थपेर पढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, पढाउने कोठाको कुरा पनि आउने रहेछ । हामीकहाँ अहिले ७५ जना विद्यार्थीलाई पढाउन पनि कक्षाकोठाको समस्या छ । हामीसँग ५५ प्रोगाम छन्, सुरुमा एमबीबीएस सुरु गर्दा ३० जना विद्यार्थी पढाउन बनाइएको कक्षाकोठामा ७५ जना पढाउनुपर्ने समस्या छ ।
आईओएम सुरुमा ३० जना विद्यार्थी पढाउने उद्देश्यले खुलेको भए पनि बिस्तारै स्तरोन्नति गर्दा गत वर्ष ६० जनाको सिट तोकिएको हो । यसपटक ७५ वटा सिट निर्धारण भएको छ । अहिलेसम्म हामीले १०/१५ जना नआउलान् भन्दै सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । सबै विद्यार्थी आइदिए भने अहिले नै कहाँ बसाउने भन्ने समस्या छ । अहिलेसम्म पनि कक्षाकोठाको संरचनामा सुधार आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सिट मात्र थपेर के गर्ने ?
त्यस्तो समस्यालाई व्यवस्थित गर्न किन पहल नगर्नुभएको भन्नुहोला, हामी यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रयासरत नै छौं । हाम्रो मल्टिस्टोरेल भवन बन्ने योजनामा छ । प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यो आइसकेपछि हाम्रा क्लास सम्बन्धहरू एक्ट्रा हुन्छन् । त्यो आइसकेपछि हामी एमबीबीएसको सिट बढाउने स्थितिमा हुन्छौं ।
पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ तह (पीजी) भर्नाको विषय लामो समयदेखि आन्दोलनकै क्रममा छ, किन यस्तो भएको हो ?
हाम्रो उद्देश्य भनेको पठनपाठनमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनु छ भने क्वालिटीका मेधावी विद्यार्थीले भर्ना हुन पाउनुपर्छ । क्वालिटीको विद्यार्थी भन्नाले जसले बढी नम्बर ल्याएको छ, त्यो सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । उनीहरूले नेपाल सरकारले तोकेकोे शुल्कमा पढ्न पाउनुपर्छ ।
कुनै विद्यार्थी मेधावी छ, ऊसँग पैसा छैन, कसैसँग कम नम्बर छ तर ऊसँग प्रशस्त पैसा छ भनेपछि पैसा र गुणस्तरको कुरा नमिलेकै कारण यो समस्या आएको हो । हामीले यही सिस्टम बसाउन यस वर्षदेखि ओपन हाउस काउन्सिलिङ (प्रवेश परीक्षामा पास भएकामध्ये अगाडि रहेका विद्यार्थीको कलेज छनोटको अवसर) लागू गरेका छौं ।
यही सिस्टम प्रयोगद्वारा मेधावी विद्यार्थीले त्रिविले तोकेको शुल्कमा पढ्ने अवसर पाउन् भनेर सुरु गरेको हौं । त्यो प्रयासमा कलेजहरूलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ । यस वर्षदेखि आईओएमले मेरिट बेसिसका विद्यार्थी छनोट गरी उनीहरूलाई दिएको सिटमा तोकिएको शुल्क लिएर पढाउने प्रथा बसाउन खोजिएको हो । यसले विद्यार्थीहरू नठगिउन् र गुणस्तरीय शिक्षाको सम्झौता नहोस् भन्ने उद्देश्यले आईओएमले सुरु गरेको नीतिमा विरोध आउनु स्वाभाविक पनि हो ।
कुनै पनि नयाँ राम्रो कुरा गर्दा विरोध आउँछ । आउने वर्षदेखि यो संस्थागत हुँदै जान्छ र परिस्थिति सामान्य बन्छ । रह्यो आन्दोलनको कुरा, यो पनि राम्रै कुराका लागि भएको हो, उहाँहरूको दुईवटा माग यससँग सम्बन्धित छन्, एमबीबीएसमा पनि योग्यताका क्रममा र सुनिश्चितता हुनुप-यो भन्ने माग छ ।
यसको सुनिश्चितता गर्न आईओएम पनि तयार त छ तर सबै आईओएमले त्यो जिम्मेवारी लिएर पछि भर्ना कुनै कारणले लिएन भने राज्यको अन्य निकायले पनि त जिम्मा लिनुप-यो नि ! हामी सबै आफ्नै हिसाबमा हिँड्न थाल्यौं, नियममा बसेनौं भने बेथिति सुरु हुन्छ ।
तपाईंहरूले काउन्सिलिङ गरेर पढाएका विद्यार्थीले भर्ना पाएनन् भने उनीहरूलाई कहाँ भर्ना गराउनुहुन्छ, काउन्सिलिङ गरेपछि भर्ना गराउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको होइन ?
त्यस्तो होइन, आईओएमले काउन्सिलिङ भएका विद्यार्थीको भर्ना लिने जिम्मा लिन सक्दैन, आईओएमले त काउन्सिलिङ गरी सबै प्रक्रिया पूरा गराएर यो मेडिकल कलेज यो ब्रान्चमा जान्छ, यो शुल्कमा भर्ना गर्ने भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिएर पठाउँछौं ।
तर, भर्ना लिने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, हामीले त फेसिलिटेड गरिदिने मात्र हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि कुनै कलेजले भर्ना लिँदैन भने विद्यार्थी आफंैले आफ्नो हक–अधिकारका लागि लड्नुपर्छ । काउन्सिलिङपछि भर्ना पाऊन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो हो ।
निजी मेडिकल कलेजले आईओएमलाई सधैं अटेर गरेजस्तो देखिन्छ, किन त्यस्तो गर्छन् ?
नीति बनाउन खोज्दा विरोध हुन्छ । आईओएमले त्यही नीति बनाउन खोजेको छ । त्यसको चित्त नबुझेर विरोधस्वरूप नटेरेजस्तो देखिएको हो । अटेर कलेजका लागि अहिलेसम्म आईओएम चुप लागेर बसेजस्तो देखिएको हो ।
अब त्यो पनि हुँदैन । त्रिविको आफ्नै नियम छ, कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी नीति–नियमावली नै आइसकेको छ । त्यसमा धेरै कुरा छन्, जुन सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले पालना गर्नुपर्छ । विद्या परिषद्ले धेरै कुराका बारेमा निर्णय गर्छ, तिनीहरूको पालना नगरे रिन्यु प्रक्रिया त्रिवि र आईओएमलाई समय–समयमा शुल्क बुझाउनुपर्नेे हुन्छ ।
समय–समयमा डकुमेन्ट मागेका हुन्छन् । ती प्रक्रिया पूरा नगरे उहाँहरूको सम्बन्धन खारेजसम्म गर्ने अधिकार छ, तर हामी त्यो चाहँदैनौ । सकेसम्म सुधारका लागि मौका दिएका छौं । यदि मौका दिँदा पनि अटेर भए के लाग्छ र ? त्यस्ता कलेजहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा रहेर कारबाही अगाडि बढाउन सुरु गरिन्छ ।
डिन हुनुअघि बाहिरबाट मूल्याङ्कन गर्दा र अहिले आफैं यो जिम्मेवार पदमा रहेर काम गर्दा के फरक महसुस गर्नुभएको छ ?
अनौठो कुरा त यहाँ छ, म त्यतातिर प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । आफूले डिनको जिम्मेवारी पाउनासाथ सुरुमा एमबीबीएसको भर्नामा तीन महिना अल्झियौं । गुणस्तर र काउन्सिलिङ पार्टमा समय लाग्यो र त्यो सकिनेबित्तिकै पीजीको कुरा आयो, तपाईंले देखिरहनुभएको छ ।
यसैमा समय गइरहेको छ । त्यसो त यो पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हो । म बाहिर बसेर हेर्दा पनि क्वालिटीलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेको हुन्थें । राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि, पाठ्यक्रम विकास समितिमा हुँदा पनि, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य हुँदा पनि हामी चिकिसा क्षेत्रको सुधारका लागि नै लागिरहेका छौं ।
अहिले हामीलाई सहयोगी हातहरू (सहायक डिन) को नियुक्ति हुन सकेको छैन । सात महिनाअघि नै नियुक्ति हुनुपर्ने हो, नियुक्ति समयमै भइदिएको भए हामीलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो, जसले गर्दा उहाँहरूको गर्ने काम आफैंले गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले अझै सोचेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन ।
आईओएम सुधारका के–कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
चुनौती धेरै छन् । आईओएम एउटा राष्ट्रिय स्तरको या देशको एउटा अति संवेदनशील र महŒवपूर्ण निकाय हो । यसको विकास गर्नु छ भने नीतिगत तहबाटै आउनुपर्छ । जस्तै– जग्गा पनि चाहियो, पैसा पनि चाहियो । नेपाल सरकारको, विश्वविद्यालयको सहयोग चाहिन्छ ।
अहिले हाम्रो देश राजनीतिक अन्योल र अस्थिरतामा रहेका बेला राजनीतिक भागबन्डालाई चिर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ । कुनै पनि काम एक्लै गर्न नसकिने भएकाले टिमवर्कको जरुरत पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षालगायत मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक छ । विस्तारका लागि जग्गा आवश्यक पर्दा भूमिसुधार मन्त्रालयको पनि सहयोग चाहियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्नुप¥यो ।
यी सबै सहयोग जुटाउनु ठूलो चुनौती हो । यदि सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सके जस्तोसुकै चुनौती पनि सामना गर्न सकिन्छ । आईओएम नेपालको पुरानोमध्येको एउटा जिम्मेवार निकाय हो । अहिले पनि हामी ५५ वटाभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । एमबीबीएस, एमडी, एमएस कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । केही वर्षदेखि डीएमएमसीएचको कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ ।
आफ्नो आङ्गिक क्याम्पस मात्रै नभई सम्बन्धन पाएका क्याम्पसहरूको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी हामीसँग छ । मेरो सबैभन्दा पहिलो र महŒवपूर्ण चासो भनेकै मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षामा कहीँ–कतै ‘ग्याप’ छ भने पनि त्यसलाई हटाउने प्रयास नै आईओएमको पहिलो उद्देश्य हुनेछ ।
अन्त्यमा आफ्नो सात महिनाको कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा के–के उपलब्धि भएको मान्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले म आएपछि एमबीबीएसमा हामी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा हामी मेरिट बेसिसमा भर्ना गराउन सफल भयौं । यसका लागि हामीले नवौं पटकसम्म परामर्शका लागि बस्नुपरेको थियो । जुन आफैंमा इतिहास हो । आउनेबित्तिकैको पहिलो सफलता मान्छु म । दोस्रो कुरा, पीजीलाई पनि मेरिट बेसिसमा भर्ना गराउन हाम्रो प्रयास धेरै हदसम्म सफल भएको मान्नुपर्छ ।
यो दुईलाई मेजर उपलब्धि मान्छु म । तेस्रो कुरा म आउनेबित्तिकै भूकम्पबाट हाम्रो डिन कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास भवनको काम सुरु भएको थिएन, त्यो भवनको काम फास्ट ट्र्याकमा गइरहेको छ । त्यसबाहेक हाम्रो क्याम्पसका भवन बनाउने प्रक्रियाहरू रोकिएका थिए, त्यसलाई अगाडि बढाएका छौं, त्यो पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ; जसले गर्दा आउने वर्षमा एमबीबीएसमा सिट बढाएर सय जना विद्यार्थी पढाउन सक्छौं कि ? अर्को कुरा, हामीले यो वर्षदेखि बीडीएसको कोर्स सञ्चालन गर्ने कि भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं ।
नेपाल सरकारले यसका लागि ३–४ करोड बजेट विनियोजनसमेत गरिसकेको छ । बीचमा धेरै समस्या र अप्ठ्याराहरूका बाबजुत पनि यस्ता कार्य गर्न सफल भएका छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा क्वालिटी र जनता नठगिऊन् भन्ने नै हो । यो राष्ट्रिय दायित्व हो । यसैमा हामी प्रयासरत छौं, केही हदसम्म सफल पनि भइसकेका छौं ।
तर, यो एक्लो प्रयासले सम्भव भएको होइन, सम्पूर्ण कर्मचारी, सहयोगीलगायत सबैको सहयोगले सम्भव भएको हो । म तपाईंलाई विश्वास दिलाउन सक्छु, नेपाल सरकारको सहयोग, सरोकारवालालगायत सबैको सहकार्य भयो भने नेपालको मेडिकल शिक्षा साउथ इस्ट एसियाको बेस्ट मेडिकल शिक्षामा परिणत गर्न सकिन्छ ।
मेडिकल शिक्षा आईओएम चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा क्षेत्र